ciidamada Liyuu Booliska deegaanka Soomaalida oo lawareegay Amaanka galbeedka Sitti. – Xeernews24
ciidamada Liyuu Booliska deegaanka Soomaalida oo lawareegay Amaanka galbeedka Sitti.
5. Mai 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararka naga soo Gaadhaya deegaamada Galbeed ee Gobolka Sitti ayaa sheegaya in cutubyo katirsan ciidamada Gaarka ah ee dawlada deegaanka Soomaalidu ay Halkaasi maanta si buuxda usooGaadheen.
Ciidamada Gaarka ah ee dawlada deegaanka Soomaalida ayaa si rasmi ah ula wareegeen amaanka deegaamo dhawr ah oo uu ugu Horeeyo deegaanka Madane oo ah Halkii maleeshiyada Canfartu xasuuqa bahalnimada ah ka gaysteen.
Ciidamada Liyuu booliska ah ee deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo waramayaa inay bilaabeen Aruurinta dadkii shacabka ahaa ee ka Firxaday deegaankooda, kuwaasi oo kusugnaa Goobo aan ka Fogayn deegaanka Madane ee degmada Ma’ayso ee Gobolka Sitti.
Dhinaca deegaanka Dan-lahelay ayaa waxaa kasoo baxay warar is khilaafsan oo kusaabsan Gacan kuhaynta deegaankaasi, warar Hordhac ah ayaa sheegaya in ciidamada Gaarka ah ee deegaanka Soomaalidu lawareegeen degaanka Dan-lahelay balse majirto cid si rasmi ah u xaqiijin karta warkaasi xidhiidhka is gaadhsiinta oo aad u liita darteed halka warar qaarkood sheegayaan in wali ciidamadi fedaraalku gacanta ku hayaan amaanka magaalada Dan-lahey.
Guud ahaan shacabka Soomaalida ee Soomaali-State ayaa u dhag Taagaya dib u soo celinta deegaamadii sida sharcidarada ah loogu wareejiyay mamulka Canfarta, kuwaasi oo maleeshiyaadka mamulkaasi ay kagaysteen Falal arxandara ah oo isugu Jira xasuuq Barakicin xadhig Wadareed boobka Hantida shacabka iyo Gabood Fallo kale oo aan la iloobi dooniin.
Warar kale ayaa lagu waramaya in maalinta salaasada ee todobaadkan u shir ka dhaci doono magaalada Addisababa shirka wuxuu dhex mari doona madaxda Soomaali-State iyo dhigooga Canfarta waxaana lagu kala saxeesan doona siddi si kama dambays ah dhulka Soomaaliyeed ee sidda baadilka ah canfarta loogu daray loogu soo celin lahaa dhulka Soomaalida ee ay huraba ugga tirsanaayeen.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/12/malee.jpg 762 370 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-05-05 22:35:212019-05-05 22:36:13ciidamada Liyuu Booliska deegaanka Soomaalida oo lawareegay Amaanka galbeedka Sitti.
fursadaha iyo Caqabadaha Horyaala Hirgalinta Go’aankii xukumada DDS. Dhgeyso Madaxweyne Ismaciil Cumar Geele oo isku shaandhayn ku saameeyey golihiisa...